Drones - Qalab Bilaash ah | Qalabka bilaashka ah (Bogga 2)
EHang waxay na tusaysaa waxa ay awood u leedahay taksi-drones-ka madax-bannaan
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno horumarka shirkadda EHang ay ku qaadatay muddo labo sano ah diyaarad gaar ah oo aan duuliyaha lahayn oo awood u leh inay rakaab ku qaado gudaha.
BioCarbon waxay xaqiijineysaa in diyaaradahooda aan duuliyaha laheyn ay horay u abuuri karaan ilaa 100.000 oo geed saacad gudaheed
BioCarbon waxay ku guuleysatay inay sii kordhiso diyaaradaheeda drones si ay hada awood ugu yeeshaan inay ku beero ilaa 100.000 oo geed saacad kaliya.
Amazon waxay durbaba ka fekereysaa soo saarida diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee awooda inay soo buuxiyaan baytariyada baabuurta korontada ku shaqeeya
Amazon waxay ku guuleysatay inay hesho patent muujinaya nidaam aad u qaas ah oo lagu buuxiyo batteriga gaarigaaga korontada isticmaalaya diyaarad.
Junta de Andalucía waxay adeegsan doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u ilaaliso xayawaannada u dhashay
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waa weyn ee lagula dagaallamayo Andalus ayaa ah in la difaaci karo lana ogaan karo ...
Ruushka horeyba wuxuu uhelay nidaamkiisa cusub ee kahortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Ruushku wuxuu muujinayaa laabta sagxaddiisa oo dhammaystiran oo awood u leh inay celiso nooc kasta oo weerar ah oo ay qaadaan raxan raxan aan duuliyaha lahayn, oo la mid ah kan ay ka shaqeeyaan Mareykanka iyo in aysan weli horumarin.
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa batari baabuur kaas oo ka qaadi kara xitaa diyaaraddaada drones-ka
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa Mi Car Inverter-ka cusub, 20.000 mAh baytar banaanka ka baxsan oo adigu adigu iska yeelan karto wax ka yar 60 euro oo awood u leh inaad ka qaadatid mobilkaaga, kaniinigaaga adoo adeegsanaya waxyaabo kala duwan sida diyaaraddaada aan duuliyaha lahayn ama laptop-kaaga.
Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ayaa fure u noqotay badbaadinta laba qof oo qatar weyn ku jira
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno sida ay diyaarad duuliye ah ay qayb muhiim ah uga qaadatay badbaadinta laba dhalinyaro ah oo ku xannibmay marin biyo mareen ah oo ku yaal xeebta Australia.
Ruushku wuxuu leeyahay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee qumaatiga u kaca
Sida laga soo xigtay warbixin qarsoodi ah oo ka soo baxday Waaxda Difaaca Mareykanka, waxaa la xaqiijiyay in Ruushka uu ka socdo mashruuca Stage-6, kaasoo abuuray diyaarad bilaa duul ah oo awood u leh inay ku shaqeyso gacan 10.000 km ah iyadoo xareysa nukliyeer 10-cagood ah. warhead. megatons.
DJI Mavic Air, baro barashada ku-simaha xiisaha leh Mavic Pro wax yar oo fiican
Uma baahnin inaan in badan sugno shirkad baaxad ahaan iyo baaxad ahaanba leh sida DJI si aan ugu soo bandhigno dhaxalka jiilka ee Mavic Pro, diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn oo leh karti iyo waxqabad weyn oo hadda loo yaqaan DJI Mavic Air.
Boeing ayaa muujineysa diyaaradeeda cusub ee loo yaqaan Drone-ka ee korontada si ay u qaadi karto 200 oo kiilo garaam
Boeing ayaa kaliya ka yaabisay dadka deegaanka iyo shisheeyaha ku nool dunida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo lagu mahadinayo soo bandhigida gaari cusub oo koronto la’aan ah oo aan cidi wadin oo qaadi kara nooc kasta oo badeecad ah oo miisaankeedu uusan ka badneyn 200 kiilo.
Japan waxay abuurtay ilaalada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'drone rorol' si loo xakameeyo is-miidaaminta 'faafida' dalkaas.
Laga soo bilaabo Japan waxaa la go'aamiyay in lagu sharaddeeyo isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si loola socdo meelaha fogfog sidaasna looga hortago dadka inay is dilaan goobaha noocan ah.
Saldhigyada Ruushka ee Siiriya ayaa waxaa ku soo duulaya raxan diyaarado ah
Laba saldhig oo Ruushku ku leeyahay Siiriya maalmo ka hor ayaa lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga hago, weerarkaas oo, ka dib baadhitaanadii hore, wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa si maldahan u sheegay in ay fuliyeen maleeshiyo kaashanaya Maraykanka
Tello, oo ah diyaarad xiiso leh oo qiimaheedu aad u sarreeyo
Ryze Tech ayaa naga yaabisay bilaabida Tello, oo ah diyaarad yar oo ah nooca aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'drone' taas oo ku qalabeysan tiknoolajiyadda ugu fiican Intel iyo DJI taas oo ka dhigeysa mid si gaar ah u xiiso badan oo ka sareysa wax walba oo badbaado leh oo ay ku isticmaali karaan kuwa yaryar ee gurigeena ku jira.
DGT ayaa adeegsan doonta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones laga bilaabo sanadka 2019
Marka loo eego waxa hadda la shaaciyey, sida muuqata Agaasinka Guud ee Taraafikada, DGT, waxay rajaynayaan sannadka 2019 inay diyaarado cusub oo aan duuliye lahayn ay la diyaariyaan oo ay si wax ku ool ah u xakameyn karaan dhammaan taraafikada waddooyinka ee waddooyinka kala duwan.
GoPro wuxuu shaqada ka eryi doonaa inta udhaxeysa 200 ilaa 300 oo shaqaale ah oo ka tirsan waaxdeeda drone-ka
Ka dib markii fiasco ee ganacsiga ee Karma, ugu dambeyntii shirkadda GoPro, dib u habeyn buuxda oo gudaha ah, waxay go'aansatay inay shaqada ka joojiso inta udhaxeysa 200 iyo 300 oo qof qaybteeda alaabada hawada.
Shiinaha wuxuu horey uhelay sahanka ugu horumarsan aduunka iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Ciidanka Shiinaha waxay soo bandhigeen WingLoong II, sahaminta iyo tiknoolajiyadda ugu casrisan adduunka ee sahaminta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Xeerarka cusub ee duulimaadyada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ayaa durbaba dhaqan galay
Sabtidii la soo dhaafay sharciyada cusub ee nidaaminaya adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si nabad galyo ah ku dhaqan galay, iyaga oo u ogolaanaya inay dul maraan magaalooyinka, dadka tirada badan iyo xitaa habeenkii.
Video: Tani waa sida ay u shaqeeyaan ciidanka Israel toogte diyaaradaha wax duqeeya
Muddo dhowr bilood ah waxaan ognahay in ciidanka Israel ay leeyihiin barnaamij ay ku jiraan ...
Diyaaraddu waxay awood u yeelan doontaa inay shidaal ku duusho duulimaadka dhexe iyada oo ay ugu mahadcelinayaan diyaaraddan aan duuliyaha lahayn ee Boeing
Diyaaraduhu, mabda'a ahaan kuwa militariga, waxay awoodi doonaan inay shidaal ku qaataan duulimaadka dhexdooda iyadoo ay ugu mahadcelinayaan diyaaradda iswada ee ay dhiseyso Boeing.
Maxaa dhacaya markii diyaarad Drone ay isku dhacdo diyaarad? Shiinaha jawaabta ayay ku hayaan
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno tijaabooyinka lagu soo qaaday Shiinaha si loo muujiyo waxa dhaca markii ay diyaarad Drone ah ay ku dhacdo diyaarad.
Laga soo bilaabo AESA waxaa lagu dhawaaqay in, ilaa maanta, gudaha Spain ay horeyba u joogeen in ka badan 2.700 hawl wadeenada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn oo leh shati uu siiyay maamulka.
Thanks to boggan cusub waxaad ka heli kartaa labadaba shaqo duuliye diyaaradeed iyo duuliye diiwaangeliya ama qabta shaqada aad u baahan tahay
Shiinaha ayaa si guul leh u tijaabiyay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee ugu weyn adduunka
Laga soo bilaabo Shiinaha waxaa la xaqiijiyay inay ku guuleysteen tijaabooyin ku saabsan waxa loo aqoonsan yahay inay yihiin diyaaradaha ugu waaweyn adduunka ee aan duuliyaha lahayn.
Mareykanka ayaa ka mamnuucaya howlwadeenada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn inay ka dulmaqaan xarumaha Nukliyeerka ee dalka
Mareykanka ayaa hada bilaabay sharci cusub oo uu si adag uga mamnuucayo inuu dul maro xarumaha Nukliyeerka ee dalka.
Tani waa natiijada ka dhalatay adeegsiga in ka badan 1000 dron si ay u iftiimiso magaalo
Sannadkan Golaha Caalamiga ah ee Fortune ayaa go'aansaday in la doorto magaalada Shiinaha ee Guangzhou si ay u martigeliso…
Mar dhow ayey sharci noqon doontaa in la duulo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn habeenkii iyo agagaaraha dhismooyinka
Waad ku mahadsan tahay Digreeto Boqortooyo, oggolaansho hore oo ka timid AESA, maamule kasta wuxuu awood u yeelan doonaa inuu duulo diyaaraddoodii habeenkii ama agagaarka dhismooyinka iyo dadka badan.
Australiya gudaheeda waxay isticmaali doonaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u ogaadaan jiritaanka shark xeebahooda
Sida ku cad bayaannadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Australia, waddanku wuxuu bilaabi doonaa adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan Drones-ka si loo sii ogaado jiritaanka kalluumeysatada ka hor.
Kuuriyada Koonfureed waxay diyaarisay ciidan diyaarado drones ah oo hubeysan
Ciidanka Kuuriyada Koonfureed waxay damacsan yihiin inay dhisaan qayb cusub oo ka kooban diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones si ay uga hortagaan deriskooda Kuuriyada Waqooyi
Wadooyinka Tareenka ee dalka Spain waxaa kormeeri doona diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones
Koox shirkado gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladeed oo uu hogaaminayo SigmaRail ayaa bilaabi doona inay kormeeraan jidadka tareenka iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Amazon waxay burburin doontaa diyaaradaheeda drones-ka haddii nooc kasta oo burbur ah la ogaado
Amazon waxay heshay patent cusub oo diyaaradahooda aan duuliyaha laheyn si habeysan loo kala jajabin doono hadii la ogaado cilad duullimaad.
Shiinaha wuxuu na tusayaa madfackeeda leysarka ee awooda inuu soo rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Qaar badan ayaa shirkadaha ah, qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu kabaa lacagta dowladda, ee maanta ka shaqeeya horumarka ...
SKYF waxay soo bandhigeysaa diyaaradeeda cusub ee aan duuliyaha laheyn oo qaadi karta ilaa 650 kiiloogaraam
Shirkadda SKYF, oo ah shirkad Ruush ah oo ku takhasustay soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ayaa soo bandhigtay diyaaraddeeda cusub ee aan duuliyaha lahayn oo ay ku qaadi karto illaa 650 kiilogaraam.
DJI Goggles RE, muraayadaha adduunka ee tartanka
DJI Goggles RE waa magaca lagu soo bandhigay indhashareerka cusub ee tartan ee ay soo saartay shirkadda soo saarta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shiinaha.
Apple waxay sii deyneysaa nooca gaarka ah ee DJI Mavic Pro
Apple waxay ka faa'iideysaneysaa heshiiska ay la gashay DJI si ay u bilawdo inay ku iibiso bakhaarradeeda, labadaba mid muuqaal ah iyo mid muuqaal ah, oo ah nooc gaar ah Mavic Pro.
DJI waxay u hanjabtaa isticmaale ka warbixiyay jebinta amniga ee server-yadooda
Kadib furitaanka barnaamijka si qofkasta oo adeegsade ah loogu abaalmariyo soo gudbinta cillad, waxa barnaamijku ka helay DJI waa hanjabaad.
Isgaarsiinta Dedrone iyo Axis waxay soo bandhigayaan tikniyoolajiyad cusub oo awood u leh inay soo ogaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Isgaarsiinta Dedrone iyo Axis waxay ku biiraan xoogagga si ay u horumariyaan barxad awood u leh baarista iyo aqoonsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aagga gaarka ah.
668-R8WHm, waa diyaarad Drone ah oo aad u dhaqaale leh kamarad HD iyo WiFi
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno 668-R8WHm, diyaarad yar oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ku qalabeysan kamarad HD iyo WiFi ah oo aad adigu leedahay wax ka yar 50 euro
NASA waxay adeegsan doontaa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee leh sirdoonka macmalka ah si ay ula socdaan xaalada badeena
NASA waxay bilawday mashruuc cusub oo isku dayi doona in lagu ogaado isbadalada ka dhacaya bada sababo la xiriira isbadalka cimilada.
Alibaba waxay ku bixisaa xirmooyinka ugu horreeya iyada oo loo marayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Alibaba waa mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee iibka wax soo saarka kuwaas oo isku dayaya inay bilaabaan barnaamijyadooda ...
Japan waxay soosaartay barnaamij cusub oo loogu talagalay in cunno loogu keeno diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Fukushima
Rakuten iyo Lawson oo ah laba shirkadood oo waawayn oo kuyaala wadanka Japan ayaa hada bilaabay barnaamij ay raashin iyo baakado ku gaadhsiinayaan magaalooyinka ay saamaysay Fukushima.
Dhiirrigelintu waxay durbaba ka shaqeyneysaa barxad cusub oo loogu talagalay maaraynta taraafikada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Wasaaradda Hormarinta Isbaanishka ayaa goordhow shaacisay cabir lagu abuuri doono madal loogu talagalay maaraynta taraafikada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Thanks to aaladdan DJI masuuliyiintu waxay awoodi doonaan inay la socdaan taraafikada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
AeroScope waa magaca ay DJI ku baabisay aaladdeeda cusub ee u oggolaaneysa la socodka iyo aqoonsiga drones-ka duulaya aag gaar ah.
Boortaqiisku wuxuu abuuri doonaa aagag gaar ah oo lagu tijaabiyo laguna soo saaro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cusub
Sida si rasmi ah loogu dhawaaqay, Boortaqiiska waxay rabaan inay awoodaan awood siinta aagag cusub oo dhamaan soo saarayaasha ay si xor ah ugu tijaabin karaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Spain ayaa yeelan doonta sharci ku saabsan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dhamaadka sanadka
Sida ku cad hadalada wasiirka hormarinta Spain hada, wadankeena wuxuu yeelan doonaa sharci cusub oo ku saabsan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee drones-ka ee xoog dhamaadka sanadka.
Shirkadaha Mareykanka ayaa kordhiya barnaamijyadooda diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyagoo uga mahadcelinaya amarkii ugu dambeeyay ee Donald Trump
Thanks to maamulka Donald Trump, shirkadaha Mareykanka waxay awoodi doonaan inay xoojiyaan horumarinta barnaamijyadooda ku saabsan gaarsiinta xirmooyinka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
Hubkan cusub ee ka imanaya Maraykanka ayaa awood u leh inuu soo rido diyaarad kasta oo aan duuliye lahayn oo ku soo dhacaysa meel u dhow
Raytheon, oo ah qandaraasle ciidanka Mareykanka, ayaa hada soo bandhigay hubkiisa cusub ee leysarka oo awood u leh inuu soo rido nooc kasta oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee suuqa yaalla.
Diyaarad rakaab ah ayaa ku dhacday diyaarad aan duuliye wadin oo ku taal Quebec
Magaalada Quebec ee dalka Canada waxaa kadhacay shil aan kahadalnay oo aan xitaa saadaalineynay mudo dheer ...
Booliska Dubai ayaa soo bandhigaya hoverbike-kooda cusub oo ay ku ilaalin doonaan wadooyinka
Intii lagu guda jiray dabaaldegga Toddobaadka Teknolojiyada 'Gitex', booliska Dubai waxay muujiyeen kii ugu horreeyay ee hoverbike cusub oo ay ku ilaalinayaan waddooyinka.
Aena waxay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsan doontaa toddobo ka mid ah garoonkeeda diyaaradaha si ay ugu sameyso kormeer amni
Sharad ka dib in shirkadaha baaxadda Boeing ay sameynayaan inay ku guuleystaan ​​hawlo aad u badan ...
CityAirbus, diyaaraddaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones ayaa hadda diyaar u ah inay la wareegaan magaalooyinkeenna
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'Airbus taksi', oo loogu magac daray CityAribus, ayaa shaqo ka bilaabi doona magaalooyinka ugu waaweyn adduunka bartamaha sanadka 2018.
Volocopter waxay ku tijaabisaa taksigeeda drone-ka hawada sare ee Dubai
Muddo dheer oo sugitaan ah kadib, Volocopter wuxuu ugu dambeyntii ku guuleystey inuu si guul leh ugu tijaabiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaanno drones-ka ee hawada sare ee magaalada Dubai
Rakaabka Rakaabka, oo ah fikrad cusub oo duulimaad duulimaad ah oo dhowaan suuqa soo gali doonta
Rakaabka Rakaabka ah waa fikrad cusub oo ah duulista gawaarida halkaas oo aad ku dhex mari karto kuna safri karto meel kasta oo aad rabto mahadnaqa matooradeeda korantada.
Wejiga Koowaad ee Warshadaha ayaa na tusaya kamaraddeeda cusub ee drones-ka oo ah 190 megapixel
Shaki la’aan, waxaa jira ganacsi aad u weyn oo ka dambeeya adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Droneska. Caddaynta waxa aan idhaahdo ...
Drones sida khabiir caymiska baabuurkaaga iyo gurigaaga labadaba
Shirkadaha caymiska waxay bilaabeen inay si wanaagsan u eegaan markay ku beddelaan khabiiradooda diyaarado taxane ah oo isku shaqo ah.
Yuneec H520, oo ah diyaarad cusub oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo si gaar ah ugu jiheysan adeegsiga xirfadleyda
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno soo bandhigida Yuneec H520 cusub, oo ah diyaarad aan duuliye lahayn oo naqshadeynta iyo shaqadeedu ku wajahan tahay suuqa xirfadda.
Tani waa waxa loo tixgeliyo inay tahay diyaaraddii ugu horreysay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u eg
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno soo bandhigida Colyaer Freedom S100, oo ah diyaaraddii ugu horreysay ee aan duuliye lahayn, oo ah nooc ay abuureen Nidaamka Sirdoonka UVS.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones ayaa hada guuri kara mugdi iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka retinas-ka aan caadiga ahayn
Waad ku mahadsantahay retinaskan cusub ee macmalka ah, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn waxay awoodi doonaan inay ku dhex dhaqaaqaan mugdiga si aad u dhaqso badan oo ka sareysa hab kasta oo amaan ah.
Seadrone horeyba waxay uheesay diyaaradeedii ugu horeysay ee nooca drone-ka ah
Seadrone, oo ah shirkad ay abuurtay Indra, ayaa shacabka u soo bandhigtay markii ugu horeysay howlgalka diyaaradeeda cusub ee aan duuliyaha laheyn ee loo adeegsado howlaha badbaadinta.
Mareykanku wuxuu abuuraa hub laser ah oo awood u leh inuu ilbidhiqsiyo ku rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Bilooyin badan oo horumar iyo tijaabooyin ah kadib, Ciidanka Mareykanka waxay umuuqdaan inay haystaan ​​hubkooda leysarka cusub oo awood u leh inay ilbiriqsiyo kusoo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Nin iibsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Daesh ayaa lagu xiray Mérida
Munaasabaddan, waxay ahayd wasiirka arrimaha gudaha laftiisa oo xaqiijiyay xarigga Mérida ee nin u heellan inuu u soo iibiyo diyaaradaha Drones-ka.
Switzerland waxay awood u siin doontaa shabakad gaarsiin leh drones bisha Oktoobar ee soo socota
Kuwo badan ayaa ah shirkadaha dhererka iyo qoto dheer ee Google ama Amazon ee si hagar la’aan ah uga shaqeeya horumarka ...
Skyfront waxay samaysaa mid ka mid ah diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn oo awood u leh inay hayso 4 saacadood iyo 34 daqiiqo oo duulaya
Skyfront waxay noo soo bandhigeysaa fiidiyoow halka ay na tusayso sida mid ka mid ah diyaaradaheeda aan duuliyaha laheyn ay awood ugu leeyihiin inay ku gaaraan ismaamul duulimaad 4 saacadood iyo 34 daqiiqo ah.
Koorsada tijaabada ah ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Aerotec iyo UCAV waxay bilaabaneysaa Sebtember 25
Jaamacadda Katooliga ee Ávila, oo ay weheliso Aerotec, ayaa bilaabi doonta koorsadeeda cusub ee duuliyaha aan duuliyaha lahayn bisha Sebtember 25.
Diyaaradani waxay awood u leedahay inay ku ogaato sharkyada waxqabad aad u weyn
Shirkadda laga leeyahay dalka Australia ee Little Ripper Group ayaa hadda soo bandhigtay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo awood u leh inay soo ogaato sharkadaha 90% saxsan.
Laanqayrta Cas waxay bilaabeysaa barnaamij cusub oo lagu doonayo in lagula socdo masiibooyinka dabiiciga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Laanqeyrta Cas ayaa hada ku dhawaaqday in ay bilaabayaan barnaamij ay ku raadinayaan in ay ku taageeraan khabiirada ku xeel dheer masiibooyinka dabiiciga ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
UN-ka ayaa darsaya sida loo sameeyo keyd macluumaad oo ay ku duuban yihiin dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee la soo saaray
Mid ka mid ah shirarkii ugu dambeeyay ee Qaramada Midoobay waxaa la soo jeediyay in la sameeyo xog ururin oo ay ku jiri karaan diiwaanka dhamaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee la soo saaray.
DJI ayaa hada ku dhawaaqday in injineeradeedu ay ku shaqeynayaan qaab lagu xakameeyo drones-ka iyaga oo aan u baahneyn qadka internetka.
UNICEF ayaa adeegsan doonta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones si ay daawo ugu keento Oceania
UNICEF ayaa hadda shaacisay qorshaheeda ay ku horumarinayso mashruuc daawooyinka loogu keenayo jasiiradaha kala duwan ee Oceania iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
3DR iyo DJI waxay ka dhigi doonaan wax soo saarkooda mid iswaafajin kara
Ugu dambeyntiina, ka dib bilo gorgortan ah, 3DR iyo DJI ayaa hadda ku dhawaaqay inay bilaabayaan inay si wadajir ah u wada shaqeeyaan si ay alaabtoodu u waafaqsanaato.
Facebook wuxuu adeegsan doonaa adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dayax gacmeedyada si uu adduunka oo dhan ugu soo bandhigo internetka
Shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabi doonto adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo Satelite-ka si ay u bilawdo mashruuceeda oo ay adduunka oo dhan ugu soo bandhigeyso internetka.
Suez Water Spain waxay abuurtaa jiil cusub oo drones ah oo loogu talagalay ilaalinta bulaacada
Suez Water Spain ayaa hada ku dhawaaqday mashruuc cusub oo ay ku dooneyso inay ku sameyso kuna soo saarto drones awood u leh la socodka nidaamyada bullaacadaha.
Faransiiska ayaa ciidankiisa ku casriyeyn doona diyaaradaha qumaatiga u kaca ee cusub
Faransiiska ayaa ugu dambeyntii xaqiijiyey in Waaxdooda Difaaca ay soo iibsan doonto diyaarado dagaal oo taxane ah oo ay ku qalabeyso ciidankeeda.
Lilium waxay maamushaa inay uruuriso 90 milyan oo doolar si ay uga dhigto tagaasideeda duulaya mid dhab ah
Lilium waa shirkadda ka dambeysa fikrad qurux badan oo dooneysa in tagaasida magaalooyinkeenna looga dhigo diyaarado aan duuliye lahayn oo buuxa.
DeltaQuad, oo ah diyaarad aan duuliye lahayn oo awood u leh inay isku milmaan 150 kiiloomitir oo ismaamul ah
DeltaQuad waa abuurkii ugu dambeeyay ee shirkadda Dutch-ka ah ee Verical Technologies, oo ah diyaarad Drone ah oo awood u leh inay jabiso dhammaan diiwaanada ismaamulka adduunka.
Kuwani waa sheekooyinka cusub ee ku jira DJI Mavic Pro iyo Phantom 4 Pro
Ugu dambeyntii maahan inaan sugno waqti dheer in shirkadda Shiinaha ee DJI ay ku dhawaaqdo dhammaan wararka jooga Mavic Pro iyo Phantom 4 Pro.
DGT ayaa u adeegsan doonta diyaaradaha iyo drones darawallada ganaaxa
War-saxaafadeedkii ugu dambeeyay ee ay soo saartay DGT, waxaa lagu shaaciyay in hay'addu ay bilaabi doonto adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa fudud si ay darawalada u ganaaxdo.
Qaar ka mid ah dadka daroogada ka ganacsada ayaa bilaabay inay isticmaalaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones si ay daroogada ugu gudbiyaan xadka
Kuwa ugu waawayn ee ka ganacsada daroogada adduunka ayaa bilaabay inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waaweyn si ay daroogada uga helaan xuduudaha dalal kala duwan.
Kani waa qoriga uu Kalashnikov u sameeyay in lagu rido diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Dalada Ruushka ee Kalashnikov ayaa hada daabacday macluumaad ku saabsan soo saarida qoriga cusub ee awooda inuu soo rido diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
Cusboonaysii diyaaraddaada loo yaqaan 'DJI drone' ka hor Sebtember ama waxay noqon doontaa mid aan la isticmaali karin
DJI waxay hadda soo saartay cusbooneysiin muhiim ah dhammaan drones-keeda, taas oo ay tahay in la cusbooneysiiyo kahor Sebtember ama waxay noqon doonaan kuwo aan waxtar lahayn.
Mareykanka wuxuu soo saaray gantaallo 'qaali ah' oo uu ku soo rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno waxa ay yihiin gantaalaha cusub ee 'dhaqaale' ee Mareykanku soo saaray si ay u soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo sida ay u shaqeeyaan.
Amazon waxay xaqiijineysaa rukhsad cusub oo la xiriirta adeegyadeeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Amazon waxay kaliya codsatay patent cusub oo laxiriira barnaamijkeeda bixinta buuxda ee iswada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
DJI waxay siisaa diyaaradaheeda drones qaab xiise leh 'offline'
DJI waxay hada ku dhawaaqday inay bilawday qaab 'offline' cusub oo diyaaradahoodu aysan sawirro, fiidiyow ama duullimaadyada ugu dirin shirkadaha shirkadda.
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee drones-ka ayaa yeelan doona howsha kormeerka keymaha iyagoo raadinaya dab qabadsiiyayaal
Markii ugu horreysay Spain, Ciidanku waxay heshiis la gaareen Jaaliyad iskeed u maamusha si ay ula socdaan kaymaha iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay leeyihiin.
BioCarbon Engineering waxay horeyba u haysatay diyaarado drones ah oo awood u leh inay dib u soo nooleyso keymaha oo diyaar ah
Shirkadda BioCarbon Engineering waxay leedahay barnaamijkeeda cusub oo diyaar ah kaas oo ay ku raadin doonaan inay dib ugu noolaadaan keymaha si iskiis ah iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Ciidanka Uruguay waxay furayaan tartan ay ku iibsanayaan diyaaradaha cusub ee drones-ka
Sida laga soo xigtay waxa hadda si rasmi ah loo daabacay, waxay umuuqataa in Ciidanka Uruguay ay aakhirka furi doonaan tartan soo afjari doona iibsashada 20 drones.
Waxay xireen mujaahid doonayey inuu ku soo rido dagaalyahan Mareykan ah diyaarad Drone ah
Jihaadiste ka tirsan dowladda Islaamiga ah oo isku dayay inuu toogto dagaalyahan ka tirsan Ciidamada Mareykanka isagoo adeegsanaya diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ee laga hago meelaha fog fog.
Ciidanka Mareykanku waxay leeyihiin iftiin cagaaran oo ay ku soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee rasaasta
Mareykanku wuxuu siiyaa iftiinka cagaaran xubnaha Ciidammadiisa si ay u soo ridaan nooc kasta oo diyaarad aan duuliye lahayn ah haddii ay u arkaan khatar.
Amazon waxay muujineysaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadeeda moobiilka ee drones
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno patent-kii ugu dambeeyay ee ay ka soo daabaceen Amazon halkaas oo aan ka arki karno sida moobiillada moobiillada droneskoodu ay noqon doonaan.
Ciidamada Mareykanka waxay ku dhawaaqeen diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'DJI drones' kuwa nugul
Ciidamada Mareykanka ayaa hada soo saaray bayaan ay ku cadeynayaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'DJI' inay yihiin daydo 'nugul', marka way joojin doonaan isticmaalkooda.
Volocopter waxay heshay maalgashi cusub oo dhan 25 milyan oo yuuro
Maanta shirkadda Volocopter waxay ku jirtaa warka mar labaad iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah, in markale, ay heshay maal-qabeen maal-qabeen ah, 25 milyan markan.
Drones waxay fure u noqon karaan horumarinta waxsoosaarka beerashada saytuunka
Shaki la'aan mid ka mid ah dalagyada ay Andalusia ku sharad badan tahay waa qaybta ...
Snapchat horeyba wuxuu ugujiraa wajigii ugu dambeeyay ee naqshadeynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Waqti dheer kadib sugitaan, waxay umuuqataa in shirkada Snapchat ugu dambeyn diyaarado cusub oo aan duuliyaha laheyn ay si ficil ahaan diyaar u yihiin.
Shiinaha wuxuu muujinayaa drones-ka qaaska ah ee kamikaze
Ciidanka Xoreynta Dadka Shiinaha ayaa muujinaya diyaaradahooda cusub ee kamikaze oo ku rakiban bambo yar laakiin xoog badan markii ugu horeysay.
Diyaarad aan duuliyaha wadin oo Isbaanish ah ayaa loo adeegsan doonaa howlaha samatabbixinta ee Maraykanka
Diyaarad gabi ahaanba iskiis u madax banaan, oo ay soo saartay shirkadda Isbaanishka ee Singular Aircraft, ayaa loo isticmaali doonaa Mareykanka gudihiisa.
Ku xirnaanta Robotics waxay muujineysaa awooda diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Ku xidhnow Robotics waa shirkad reer Boortaqiis ah oo la aasaasay 2015 Eduardo Mendes iyo Raphael Stanzani oo ku guulaystay inay galaan ...
Ciidanka Isbaanishku waxay tijaabiyaan nidaam cusub oo awood u leh inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duulimaadka dhexe ku jira
Sida dalal kale oo badan, Ciidanka Isbaanishku waxay la ildaran yihiin dhibaatooyin badan si ay uga difaacaan saldhigooda Mosul ...
Shirkadda Endesa ayaa dib u eegis ku samayn doonta in ka badan 4.000 oo khad oo khadadka Andalus ah iyadoo ay la socon doonto diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn
Shirkadda Endesa ayaa hadda ku dhawaaqday in markii ugu horreysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Andalus loo adeegsan doono in lagu fuliyo dib u eegista khadadka danab dhexdhexaadka ah iyo kuwa sare.
Amazon waxay durbaba ka fekereysaa sida loo basaaso macaamiisheeda iyada oo loo marayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Amazon waxay hadda codsatay patent cusub oo ay diyaaradahooda aan duuliyaha laheyn, marka ay keenayaan xirmo, ay awoodaan inay soo uruuriyaan xogta macaamiisha.
Mashruucan xaqiiqda ah ee la kordhiyay wuxuu doonayaa inuu caawiyo hawlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Jaamacadda Polytechnic ee Madrid, waxaa la filayaa in, iyada oo loo marayo xaqiiqda la kordhiyay, hawlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu caawin karo shaqadooda.
Murcia ayaa kormeeri doonta keymaheeda iyadoo kaashaneysa diyaaradaha qumaatiga u kaca
Murcia waa mid ka mid ah magaalooyinkaas, ka dib markii ay bilawday barnaamijyo gaar ah oo la xiriira teknoolojiyada cusub, waxay umuuqataa in ...
Shirkadda Tactical Missiles Corporation ayaa durbaba ka shaqeyneysa sameynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka
Shirkadda Tactical Missiles Corporation ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in dhowr hanti oo shirkadeed ay horay uga shaqeyneysay soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka.
Kani waa aeromoto ay soo bandhigtay Scorpion-3
Scorpion-3 ayaa hadda ka faa'iideystay dabaaldega bandhigga aerospace ee caalamiga ah MAKS 2017 si ay u soo bandhigaan hoverbike cusub.
Ciidamada Badda ee Mareykanka waxay ku shaqeeyaan leysar si ay u soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Ciidamada Badda ee Mareykanka ayaa bilaabay howlo ay ku soo saarayaan hubka leysarka ee 100 kW oo awood u leh inuu soo rido diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, diyaaradaha, iyo xitaa gantaalada.
NASA waxay tiri waxaad dhawaan bilaabi doontaa nacaybka dhawaqa drones
Sida muuqata iyo sida ku cad shaqadii ugu dambeysay ee ay daabacday NASA, dhawaqa ay soo saarto diyaarad walbo oo aan duuliyaha laheyn waa mid aad uga dhib badan gaariga kale.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan “Drones” oo ay ku rakiban yihiin laser si loola socdo gaasaska wasaqeysan
Mashruuc ay fuliyeen koox cilmi baarayaal ah oo ka socda machadka heerarka iyo teknolojiyadda oo ay kaashanayaan ...
ParaZero SafeAir, baarashuud loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones-ka loo yaqaan
Haddii aad waligaa duushay diyaarad aan duuliye lahayn ama aad ku dhowdahay qof u ahaa qofkii ugu horreeyay ...
JAXA waxay u dirtaa diyaarad Drone ah Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno dhammaan astaamaha ay leedahay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee cusub ee JAXA u dirtay Saldhigga Hawada Caalamiga ah.
DLR RacerX, waa diyaaradaha ugu duuliyaha yar adduunka
Ka dib markii ay gaareen xawaare sare oo ah 288 kiilomitir saacaddiiba, DLR RacerX ayaa loo qoondeeyay inay tahay diyaaradda ugu duuliyaha yar adduunka.
DJI waxay wajaheysaa beel heegan u ah jabsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
DJI waa mid ka mid ah shirkadaha si dhab ah u qaatay oo aan cidna u oggolaanaynin ...
MIT waxay suurtogal ka dhigeysaa in la abuuro drones-ka cabbirka cayayaanka
Waad ku mahadsan tahay mashruucii ugu dambeeyay ee weynaa oo ay daabaceen taxane injineero iyo cilmi baarayaal ka socda MIT, maanta waxaan ka hadli karnaa ...
Maxaad ugu dallacsiineysaa gaarigaaga korontada wata diyaarad Drone ah?
Darko Darmar Markovic, oo ah nashqadeeyaha reer Serbia, wuxuu soo bandhigayaa hab xiiso leh oo baabuurta korontada looga qaado meel kasta oo baabuurta la dhigto.
Tani waa sida hagaha taraafikada hawluhu u dhaqmo markii diyaarad aan duuliyuhu wadin ay ku soo dhacdo garoonka diyaaradaha
Gelitaanka meesha aan rabo inaan ku tuso fiidiyoow aad ku arki karto waxa dhacaya markii diyaarad yar oo aan duuliye lahayn ay ku soo duusho hawada sare ee garoonka diyaaradaha.
Israel waxay la wareegtay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Droneska oo ay ku rakiban yihiin qoryaha darandooriga u dhaca si ay ugu dagaallamaan magaalooyinka
Duke Robotics waa shirkad Mareykan ah oo u qaabilsan horumarinta iyo dhismaha diyaaradaha drones-ka ee hubeysan ee dhowaan imaan doona Israel
National Geographic wuxuu daabacaa sawiradii ugu fiicnaa ee lagu qaado drones-ka 2017
Maaddaama sanad walba National Geographic ay soo daabacday kaliya 12 sawir ee finalka ee daabacaadda 2017 ee sawir qaadista ugu fiican ...
Dubai waxay bilaabi doontaa adeegyadeeda tagaasida aan duuliyaha laheyn bishaan July
Dubai waxay noqoneysaa magaaladii ugu horreysay adduunka ee laga helo adeegga tagaasida aan duuliye lahayn oo awood u leh inay raacdo dadka safarka ah.
Spain gudaheeda aad ayey u adkaan doontaa in la arko diyaarado drones oo guryo ku keenaya
Dhibaatooyinka ay tiknoolajiyada cusub sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sababi karaan, waxaa suuragal ah inaysan suurta gal ahayn inay keenaan baakado.
Ruushka ayaa noqon doona awooda ugu horeysa ee soosaarida diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones
Sida laga soo xigtay bayaannadii ugu dambeeyay ee uu soo saaray Ra'iisul Wasaare Ku-Xigeenka Ruushka, Dmitri Rogozin, sida muuqata hoggaamiyeyaasha waddanku ma ahan oo keliya ...
Booliisku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu aqoonsado diyaarad kasta oo duuliye la’aan ah
Mahadsanidiin nidaamkan cusub ee laga sameeyay Mareykanka, sarkaal booliis ah ayaa awood u yeelan doona inuu aqoonsado wixii diyaarad aan duuliye lahayn ah ee duulimaadyada ku jira.
UNICEF iyo Malawi si ay u bilaabaan barnaamij cusub oo aan duuliye lahayn
Thanks to wadashaqaynta UNICEF, Malawi waxay noqoneysaa tii ugu horreysay Afrika oo dhan si loo helo marinka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo si shaqeysan u shaqeynaya.
Facebook ayaa ku dhawaaqday hagaajinta diyaaradda Drone-ka ah oo internetka u qaadi doonta meelaha fogfog
Facebook ayaa hadda ku shaacisay shabakadiisa bulshada horumarada la taaban karo ee ay hada ku tijaabisay mashruuceeda internetka aduunka oo dhan.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ka dhanka ah xaalufinta dhirta keymaha
Susan Graham waa injineer soo saartay nidaam madax-bannaan oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u awoodaan inay geedo gebi ahaanba iskiis u aasaan.
MIT wuxuu na tusayaa diyaaradihiisa cusub iyo kuwa gaarka ah oo leh giraangiraha
MIT waxay soosaaraysaa nooc cusub oo ah drones awood u leh inay ku wareegaan dhulka ama duulaan iyadoo kuxiran duruufaha nagu hareeraysan.
Shiinaha wuxuu ina tusayaa sida leysarka ugu horreeya ee awood u leh inuu soo rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duulimaadka dhexe u eg
Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Akadeemiyada Shiinaha ee Injineeriyada Fisikiska ayaa hadda soo saaray leysar awood ku filan oo ay ku soo ridi karaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Mareykanka ayaa durbaba ka shaqeynaya diyaarad Drone ah oo awood u leh inay burburiso gantaalada
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno diyaaradda cusub ee aan duuliyaha lahayn ee lagu soo saaray Mareykanka, waa unug awood u leh inuu soo rido gantaallada isaga gudba qaaradaha.
Midawga Yurub waxay rabaan inay sharci u yeeshaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu diyaariyo laba sano gudahood
Midowga Yurub ayaa hada ku dhawaaqay inay qoondeyn doonaan ilo dheeri ah si sharci cusub loogu helo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee la heli karo kahor sanadka 2019.
Haysashada diyaarad duuliye ah oo xirmo gurigaaga u keenta waa mid horay uga suurta gashay Shiinaha
JD.com waa shirkad shiineys ah oo maanta durba bilowday inay xirmooyin u gudbiso macaamiisheeda iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee cabirkoodu kala duwan yahay.
Drone Hopper wuxuu ku guuleystey abaalmarinta '2017 Aeronautical Innovation Award' iyada oo ay ugu wacan tahay mashruucii ugu dambeeyay
Diyaaradda Drone Hopper ayaa la siiyay Abaalmarinta Aeronautical Innovation 2017, shaqadeeda soo saarista diyaarad aan duuliye lahayn oo ka caawin karta daminta dabka.
Volocopter wuxuu helayaa iftiin cagaaran si loogu tijaabiyo Dubai
Volocopter, waa mashruuc taksi oo madax-bannaan oo aan duuliyaha lahayn, ayaa ugu dambeyn helay nalka cagaaran si uu uga billaabo tijaabada garoonka magaalada Dubai.
Airbus waxay si guul leh u tijaabisaa helikabtarka iskiis u madax banaan
Airbus ayaa hada nagaga yaabisay warsaxaafadeed cusub oo ay noogu sheegayaan sida ay horeyba ugu guuleysteen tijaabinta helikabtarkooda iswada.
Koox ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa loo xilsaari doonaa baaritaanka saliidda ku daadatay badaha sare
Koox cilmi-baarayaal ah oo ka socda Jaamacadda Cartagena ayaa ka shaqeynayay nidaam madax-bannaan oo loo yaqaan 'drone system' si loo ogaado saliidda daadatay.
Drones si looga hortago dabka kaynta
Koox cilmi baarayaal ah ayaa ka shaqeynaya sameynta hanaan looga hortago dabka keymaha iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
Jacaylka Drone? Kuwani waa xisaabaadka 'Instagram' ee ay tahay inaad raacdo
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno dhowr ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee 'Instagram' si loo barto farsamooyinka sawir qaadista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Airbus ayaa durbaba ka shaqeyneysa diyaarado cusub oo taxane ah oo awood u leh inay dajiso maraakiibta
Airbus ayaa hada mashruuc cusub ka hirgalisay wadanka Singapore kaas oo maraakiibta lagu rari karo isla markaana si toos ah looga soo dejin karo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan Drones.
Snapchat wuxuu iibsadaa shirkad aan duuliye lahayn
Waqtigan xaadirka ah hubaal waan wada ogaan doonnaa Snapchat, shirkad ku guuleysatay wax umuuqday wax aan macquul aheyn xilligan ...
Wadanka Hungary waxa ay barayaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones si ay ugaarsadaan sida yeyda
Seynisyahanno ku sugan Hungary waxay soo saareen algorithm awood u leh inay si fiican ugu ekaadaan dhaqanka xirmo yeey ah.
Goobaha Ciyaaraha Swift ayaa hadda kuu oggolaanaya inaad barnaamij ka dhigato aalado, drones, iyo xitaa aaladaha muusikada
Goobaha Ciyaaraha Swift waa codsi bilaash ah oo laga heli karo Dukaanka Play kaas oo aad adigu barnaamij ku sameyn karto aalado, drones iyo qalabka muusikada adigu.
Drones waxay si weyn u fududeyn kartaa shaqada 061
Laga soo bilaabo gobolka Jaén, waxaan ka helnaa macluumaad ku saabsan sida ciidamada gurmadka sida 061 ay u bilaabeen inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ku biiraya dagaalka ka dhanka ah kaneecada shabeelka
Khubaradu waxay bilaabeen inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo fiidmeerta si ay u xakameeyaan una cirib tiraan aafada kaneecada shabeelka ah ee ku habsata aagga badda Mediterranean-ka ee Isbaanishka.
Drones waxay noqon doontaa farshaxanada cusub ee wax lagu qoro mustaqbalka fog
Si tartiib tartiib ah, adeegsi cusub oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ayaa soo ifbaxaya, iyadoo fikrad kasta oo cusub sheeko cusub ay ka muuqato suuqa ...
DJI Spark, diyaarad yar, raqiis ah oo karti badan
Shirkada DJI waxay hada nagala yaabtay soo bandhigida DJI Spark cusub, diyaarad yar oo xiiso leh oo runtii aad jeclaan doonto.
Amazon waxay bilaabaysaa inay ka fikirto hanjabaadaha ka imaan kara diyaaradaha drones-ka ganacsi
In kasta oo aysan weli jirin sharci kala hagaya, haddana Amazon waxay sii waddaa inay ka shaqeyso horumarinta diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee loogu talagalay in la keeno.
DJI waxay ka hadlaysaa barnaamijkeeda cusub ee maaddooyinka badan
DJI ayaa hada ku dhawaaqday abuuritaanka barmaamij cusub oo fiidiyoow ah halkaas oo qof kasta oo isticmaale ah uu soo gelin karo fiidiyowyadooda isla markaana adduunka tuso.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ma adeegsan doonto diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay ula socoto xuduudaheeda
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ugu dambeyn go’aansatay inaysan adeegsan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drones-ka si ay uga caawiso la socodka xuduudaha laga soo galo Ceuta iyo Melilla.
Airbus Aerial, qayb cusub oo ku takhasustay adeegyada ganacsiga ee leh diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Airbus Aerial waa qayb cusub oo ay abuurtay shirkadda weyn ee aerospace Airbus si ay awood ugu yeelato inay u soo ururiso una falanqeyso sawirrada iyo xogta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Dagaal ganacsi oo xiga ayaa lagula dagaalami doonaa cirkayaga
Shirkadaha waaweyn ee hawada sare ka shaqeeya waxay raadinayaan inay horumariyaan wax soo saarkooda si ay ugu diyaar garoobaan dagaal ganacsi oo xiga.
Tani waa sida adduunku u eego gadaashiisa kaamerada dhowr diyaaradood
Gelitaanka meesha aan rabo inaan ku tuso fiidiyowyo kaladuwan oo laga duubay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aad ku raaxeysan karto, marka laga eego aragtida shimbiraha, meelaha ugu wanaagsan adduunka.
Edgybees waa shirkadda ka dambeysa soodhaweenta dhabta ah ee fudud ee soojiidashada ah oo aad kula raaxeysan karto diyaaraddaada 'DJI drone'.
DJI Oo Soo Saartay Warar Cusub Oo Ay Ka Hortageyso Diyaaradaheeda Drones-ka Inay U Duulaan Siiriya Iyo Ciraaq
Iyadoo aan lagu dhawaaqin sii deynta cusbooneysiin cusub, DJI waxay kaliya xadiday dhammaan barnaamijyadeeda diyaaradaha droneska si aysan ugu duuli karin Ciraaq iyo Suuriya.
NTT Docomo waxay na tusaysaa hadiyaddeeda wareega ah ee suuqgeynta iyo xayeysiinta
NTT Docomo ayaa hada nagaga yaabisay fikrad aad u xiiso badan oo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ka dhigaysa xulafada ugu fiican shirkadaha suuq geynta.
Larry Page wuxuu xiiseynayaa gaariga duulaya ee mustaqbalka
Mid ka mid ah shirkadaha u heellan horumarinta gawaarida duulaya ee bini-aadamka ee Larry Page uu maal-galiyay, ayaa na tusaysa noocyadeeda cajiibka ah.
DJI Goggles, muraayadaha lagu duulo drones-ka qofka koowaad
DJI Goggles, oo ah fikrad cusub oo bandhig ah oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga heli karo suuqa laga bilaabo Maajo 20 illaa 549 euro.
Air Robotics waa shirkaddii ugu horeysay ee gaar loo leeyahay ee ruqsad u haysata duullimaadyada ganacsiga ee iswada
Air Robotics waa shirkaddii ugu horreysay ee ogolaansho ka hesho maamulka inay ganacsi ahaan uga faa'iideysato mashruuckeeda iswada ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
DJI Phantom 4 Advanced, waxay hagaajineysaa kamaradaada iyadoo hoos u dhigeysa qiimaheeda
DJI waxay nagaga yaabisay bilawga Phantom 4 Advanced, diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn oo suuqa laga heli doono Abriil 30.
Xiriirka kubada cagta yurub ee UEFA ayaa ka feejigan weerar diyaaradeed oo laga yaabo in ay ku qaado finalka champions League
UEFA waxay ka baqayaan in weerar argagixiso oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka dhacaan inta lagu guda jiro dabaaldega finalka Champions League.
Spain ayaa bilaabi karta adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay u ilaaliso xuduudaha dalka
Thanks to mashruuca Surveiron, xuduudaha Spain waxay awoodi doonaan inay ku tiirsanaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u fuliyaan howlaha kormeerka iyo ilaalinta
Jingdong ayaa hadda ku dhawaaqday abuuritaanka 150 garoon diyaaradeed oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Jingdong, oo ah sharikad ganacsi oo laga leeyahay Shiinaha kana ganacsata dhanka elektarooniga, ayaa hadda ku dhawaaqday in muddo saddex sano gudahood ah ay ku dhisi doonaan 150 garoon diyaaradeed oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Canon waxay horeyba uga shaqeyneysaa soo saarida diyaaradeeda
Ka dib markii ay keeneen kamaradihii ugu dambeeyay ee awood leh suuqa, Canon wuxuu aakhirkii go'aansaday inuu diirada saaro kana shaqeeyo diyaarad aan duuliye lahayn oo xirfadlayaal ah.
Switzerland gudaheeda waxay bilaabeen inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay ugu gudbiyaan shaybaarka shaybaarka
Qaar badan ayaa jira munaasabadaha ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ee ku habboon khubarada wax ka beddelay, ay ku awoodaan inay adeegyo ku siiyaan ...
Yuneec wuxuu ku dhawaaqay shaqo ka fadhiisin cusub
Yuneec waa shirkaddii ugu dambeysay ee la xiriirta waaxda diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee, kadib ballaarin ballaaran oo caalami ah, waxay ku dhawaaqday shaqo ka joojinta qeyb ka mid ah shaqaalaheeda.
Tani waa sida SEAT u aaminsan yahay in diyaaradaha mustaqbalka ay noqon doonaan
SEAT, waa shirkad caan ku ah aduunka oo dhan soo saarida gawaarida iyo qaabeynta, waxay muujineysaa sida ay u aaminsan yihiin in diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay gaari karaan warshadooda.
Booliiska Mareykanka ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones
Mareykanku wuxuu horeyba u lahaa magaalooyin dhowr ah oo laga fikirayo ikhtiyaarka ciidamadooda booliis ee awood u leh inay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones.
Kooxda Caalamiga ah ee Delsat waxaa lagu rakibay garoonka diyaaradaha ee Teruel
Kooxda Caalamiga ah ee Delsat waxay ku dhawaaqeysaa in xafiis cusub laga furayo garoonka diyaaradaha ee Teruel qaybteeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Amazon Primer Air, hal talaabo oo u dhow inuu noqdo xaqiiqo
Codsiyo badan iyo sugitaan kadib, Amazon waxay ugu dambeyn awood u yeelatay usbuucaan inay tijaabiso adeegeeda Prime Air ciidda Mareykanka.
Thanks to mashruucan, dhowr diyaaradood ayaa wada shaqeyn doona
Thanks to mashruuc ay sameeyeen cilmi baarayaal badan oo ka tirsan Jaamacadda Zurich, dhowr diyaaradood ayaa hadda wada shaqeyn kara.
Tani waa qorshaha Difaaca ee lagula tacaalayo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Daacish ee ku sugan Ciraaq
Wasaaradda Difaaca ee Isbaanishka ayaa raadineysa waddo ay ku hesho oo ay ku dhigto gaashaan elektaroonig ah saldhigga Besmayah.
Shirkadda Huawei waxay ku shaqeysaa nidaam awood u leh inay ku soo rogto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duulimaadyada ah
Huawei wuxuu na tusayaa barxad dhameystiran oo lagu soo buuxiyo baytariyada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyagoon haysan inay joojiyaan matoorradooda.
Ruushka wuxuu horey u haystay hub awood u leh inuu naafo ka dhigo diyaarad kasta oo aan duuliyaha lahayn
Sababtoo ah adeegsiga gantaalkaas oo ka badan 3,5 milyan oo doolar oo loo adeegsaday in lagu soo rido wax fudud ...
Gladius waa diyaarad aan duuliye lahayn oo awood u leh inay duubto tayada 4K
Gladius waa gujis biyo ah oo gaar ah oo awood u leh inuu duubo oo leh tayo gaareysa ilaa 4K oo uu ku dhex maro qoto dheer ilaa 100 mitir.
Arcelor Mittal wuxuu rabaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'drones' warshadeeda
Arcelor Mittal, intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay shirkadaha ka shaqeeya waaxdaas, wuxuu uun ku dhawaaqay inuu raadinayo la-hawlgalayaal si ay u horumariyaan drones madax-bannaan oo loogu talagalay warshadeeda.
DARPA SideArm, waa mashruuc lagu doonayo in diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay kusoo degaan dhowr mitir
DARPA ayaa hadda dadweynaha u soo bandhigtay waxa ay ugu magac dareen SideArm, oo ah cudud gaar ah oo awood u leh inay soo qabato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duulimaadka dhexe.
Aeropace Interceptor, oo ah diyaarad iswada oo awood u leh inay aqoonsato oo ay dhexdhexaad ka noqoto diyaaradaha kale ee aan duuliyaha lahayn
Aeropace Interceptor waa diyaaradii ugu dambeysay ee ay sameystaan ​​ragga ku sugan Airspace, waa unug awood u leh baarista iyo ka hortagga diyaaradaha kale ee duulimaadyada kujira duulimaadka.
Waxay soo ridaan diyaarad yar oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'Patriot gantaal'
Xulafada Ciidamada Mareykanka waxay soo ridayaan diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ah ee 200-euro iyagoo adeegsanaya gantaal Patriot ah oo lagu qiimeeyay ku dhowaad 3,5 milyan oo doolar.
Diyaaraddani waxay iska caabinaysaa dhammaan noocyada naxdinta leh
Laga soo bilaabo Iskuulka Federaalka ee Farsamada Farsamada ee Lausanne waxay noo soo bandhigaan diyaarad qaas ah oo awood u leh inay iska caabido nooc kasta oo shil ama jug ah
DroneShow, dhacdo la xiriirta adduunka diyaaradda Drone-ka oo lagu qaban doono Catalonia
DroneShow waa carwadii ugu horreysay ee la xiriirta adduunka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qabto Catalonia, dhacdo aan kugula talineyno booqashada.
Sida laga soo xigtay bayaannada qaarkood, Trump ayaa sida muuqata CIA-da u fasaxay inay fuliso weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn markay u arkaan inay ku habboon tahay.
Indra waxay soo bandhigeysaa faahfaahin ku saabsan mashruuca ARMS, oo doonaya in la ogaado oo lagala wareego duuliye kasta oo ka yimaada kontoroolaheeda.
Waxay damacsan yihiin inay soo afjaraan gaajada adduunka iyagoo ku saleynaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la cuni karo
Windhorse Aerospace waa shirkad Ingiriis ah oo ujeedadeedu tahay inay soo afjarto gaajada adduunka iyadoo abuuraysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la cuni karo.
Tani waa sida shirkaduhu u tijaabiyaan drones-ka nabadgelyadaada
Virginia Tech waxay qaaddaa tijaabooyin taxane ah oo muujinaya waxyeelada ay diyaaraddu geysan karto haddii ay ku dhacdo wejiga qofka.
Kuwani waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay adeegsadaan waaxda dab damiska ee New York
Waqti fog ka hor waxaan fursad u helnay inaan ogaano in Waaxda Dabka ee New York ay daneyneyso baaritaanka ...
Airbus Pop.Up, waa gaari iskiis u madax bannaan oo awood u leh inuu ku dhex maro hawada
Airbus Pop.Up waa sheeko cusub oo ragga ka socda Airbus, oo kaashanaya khabiiro Italdesing, ay ku soo bandhigeen Geneva Motor Show.
Picolissimo, oo ah diyaarad yar oo aan duuliye lahayn oo ay sameysay daabacaadda 3D
Picolissimo waa diyaaradda ugu yar ee adduunka, nidaam loo qaabeeyey ku mahadsanida isticmaalka daabacaadda 3D.
UPS waxay ina tuseysaa sida ay noqon laheyd la shaqeynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
UPS, oo ay ugu mahadcelinayaan iskaashiga khabiirada Workhorse, ayaa ina tusaya isbeddelka ugu dambeeyay ee barnaamijkooda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Machadka Ruushka ee Duulista Qalabka wuxuu u sameeyaa mashiin loogu talagalay drones daabacaadda 3D
Injineerada ka socda Machadka Ruushka ee Duulista Qalabka waxay maareeyaan soo saarista iyo soo saarida matoorka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyagoo adeegsanaya daabacaadda 3D.
Mashruuca SideArm ama sida loogu qabsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xadhig leh fiilo iyo shabaag
Mashruuca SideArm waa mashruuc ay soo diyaarisay Aurora Flight Sciences oo ay maalgelisay DARPA si ay u qabato una bilowdo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
GoPro Karma ayaa dib ugu soo laabtay suuqa kadib markii dib loogu yeeray sababo la xiriira dhibaatooyin dhanka duulimaadka ah
GoPro ayaa hada ku dhawaaqday inay dib ugu soo laabatay suuqa diyaaradeeda soo jiidashada leh ee Karma ka dib markay xallisay dhibaatooyinka xagga tamarta ee keenay inay ka baxdo.
Tani waa waxa aad ku sameyn karto oo aadan ku sameyn karin diyaaraddaada, sida ay sheegtay EASA
Gelitaan meesha aan uga hadli doonno qaab aad loo soo koobay oo ku saabsan waxa aad awoodid iyo waxa aadan ku sameyn karin diyaarad aan duuliye lahayn maanta sida waafaqsan sharciyada AESA.
DronesDirect wuxuu noo sheegayaa mashruuciisa ugu dambeeyay, dallad si buuxda u madaxbannaan oo loo yaqaan 'drone'
DronesDirect waa shirkad Ingiriis ah oo maanta sameysa warar iyada oo loo marayo mashruuc aad ku iloobi karto dalladdaada guriga adiga oo aan ka baqaynin waqtiga.
Iskiis, diyaarad Drone ah oo loogu talagalay in lagu qaado sawirada
Is-iskaa wax u qabso waa diyaarad duuliye ah oo ay diyaariyeen koox injineero ah iyada oo ujeedadu tahay oo keliya qaadashada dhammaan noocyada is-wada-shaqeynta.
Mashruucani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhisto diyaarad aan duuliye lahayn oo loo yaqaan 'LEGO'
Waad ku mahadsan tahay mashruucan fudud ee qaaliga ah ee lagu daabacay Kickstarter, waxaad awoodi doontaa inaad sameysid diyaarad kuu gaar ah qaybaha LEGO.
VA001 waxay jabisaa rikoorka duullimaadyada adduunka
Waqtigan xaadirka ah, sida horumarinta iyo cilmi baarista aagagga kale ee tikniyoolajiyadda, shirkadaha ma ahan oo keliya ...
Diyaaradahan baakadaha dusha laga tuuro ah ayaa ku habboon gaarsiinta daawada
DARPA waxay noo sheegaysaa mashruuc cusub oo ay ku dooneyso inay ku sameysato drones balastar la tuuri karo, tusaale ahaan, u keento daawooyinka.
Tagaasida hawada ee Airbus ayaa bilaabi doonta tijaabooyinkooda garoonka sanadkan
Airbus waxay xaqiijineysaa in barnaamijkeeda horumarinta tagaasida hawada ay diyaar u noqon doonto inay sameyso tijaabooyinka ugu horeeya dhamaadka sanadkan 2017.
Tani waa sida cajiibka ah jahwareerka hawada ee ay soo saarto diyaarad Drone ah
NASA, ka dib daraasad ay ku sameysay diyaarad Drone ah oo loo yaqaan 'DJI drone', waxay video naga tusaysaa buuqa hawada ee ay awood u leedahay inay soo saarto.
DV WING, oo ah diyaarad aan duuliye lahayn oo loogu talagalay saxnaanta beeraha
DV WING waa nuuca ugu dambeeya ee nooca aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan Drone Volt waxaana loogu talagalay ugu horeyn shaqada saxda ah ee beeraha.
Google ayaa joojisay mashruucii ay ku soo saarneyd diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Google ayaa hada ku shaacisay bayaan rasmi ah go’aanka ay shirkadu ku xidhayso dhamaan mashaariicdeeda la xidhiidha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Tani waxay noqon doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cusub ee mustaqbalka
Perdix waa magaca ay ciidamada mareykanka ku baabtiisay diyaaradahooda cusub ee drones-ka.
Baqbaqaaq wuxuu ceyriyey 290 shaqaale oo ka tirsan waaxda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Baqbaqa ayaa imika soo saaray warsaxaafadeed ay ku shaacinayaan shirkad dib u habayn lagu samaynayo taas oo sababi doonta in 290 qof shaqo la’aan noqdaan.
Xpeller, oo ah aaladda kahortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay soo saartay shirkadda Airbus
Xpeller waa magaca hoosta ay Airbus ku soo bandhigtay horumarkii ugu dambeeyay, qalab cusub oo lagula dagaalamo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ee CES 2017.
Uvifi Draco, oo ah diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ah oo loo wada gaabiyo
Draco waa magaca ay ragga ka socda Uvifi ku baabtiisteen diyaaradooda cusub ee loo yaqaan 'drone' looguna talagalay in loogu isticmaalo noocyada kala duwan ee jinsiyadaha.
Flyt 16, oo ah diyaarad Drone ah oo qaadi karta dadka
Flyt 16 waa fikradda taksi aan duuliye lahayn oo ragga ka socda Flyt Aerospatial ay ku guuleysteen inay hirgeliyaan, nooc hore oo muujinaya ballanqaad weyn.
GRIFF 300, oo ah matoorro awood u leh inuu raro ilaa 225 kiilogaraam
Haddii aad tahay qof jecel diyaaradaha drones ama si toos ah ugu baahan cutub awood u leh inuu qaado culeys ku filan oo uu uga dhaqaaqo ...
Yi Erida, diyaaradda adduunka ugu deg deg badan ayaa suuqa soo gali doonta bisha Janaayo
Soo bandhigida kamaradeeda cusub ee waxqabadka kadib, Xiaomi waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa diyaaradeeda cusub oo loo baabtiisay Yi Erida.
Diyaaradaha drones-ka ee 'Amazon drones' waxay lahaan doonaan awood ay ku leexdaan fallaaraha
In yar oo ka mid ah Amazon waxaan ka helnaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iswada, kuwaas oo horeyba u lahaa awood ay kaga leexdaan fallaaraha.
Xiaomi Yi 4K +, kamarad ficil cusub oo aad jeceshahay
Haddii aad raadineyso kamarad ficil cusub oo loogu talagalay diyaaraddaada, hubaal waad jeclaan doontaa dhammaan astaamaha iyo qiimaha cusub ee Xiaomi Yi 4K +.
Ka ilaali drone-kaaga hargab qaboobaha Christmas-ka adigoo ku ilaashanaya funaanad wanaagsan
Sida muuqata moodadii ugu dambaysay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa soo gaadhay Spain, ka ilaali qabowga xilliga qaboobaha adigoo ku qalabaynaya funaanad sida eey ah muddadan.
Baalal dabiici ah ayaa noo oggolaan doona inaan sameysano drones awood u leh inay u duulaan sida shimbiraha
Seynisyahanno ka tirsan Iskuulka Federaalka ee Farsamada Gacanta ee Lausanne ayaa ku guuleystey inay soo saaraan nidaam baal u leh samaynta duulimaadka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida shimbiraha.
7-Kow iyo toban, shirkad gaysay baakadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu badan adduunka
7-Kow iyo tobnaad waa silsilado dukaamo ah oo ku yaal Mareykanka oo maanta ku guuleysatay inay sameyso ku dhowaad boqol alaab ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Vodafone waxay rabtaa inay masuul ka ahaato xakamaynta taraafikada hawada
Vodafone waa mid ka mid ah musharixiinta loo xushay inuu noqdo madaxa hagista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yurub oo dhan.
Faahfaahin ka baro barnaamijka cusub ee Ubudrone-Talent Cluster oo ay abuurtay Jaamacadda Burgos
Jaamacadda Burgos ayaa hadda sii deysay dhammaan faahfaahinta ku jirta barnaamijka cusub ee Kooxda Ubudrone-Talent.
Airbus waxay dooneysaa inay noqoto bartilmaameedka suuqa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Airbus waxay xiiseyneysay inay soo gasho suuqa ganacsiga ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, shaqadan darteed, waxay ku abuureen qayb cusub magaca 'DroneLab'.
Amazon Prime Air wuxuu bilaabaa inuu qaado talaabooyinkiisa ugu horeeya
Hadda waxaan hubaa inaan wada ognahay sida shirkaduhu u jecel yihiin Google, in kastoo ay maanta tahay ...
ScaraBot X8, octocopter aad u gaar ah
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno dhammaan astaamaha iyo astaamaha ku jira ScaraBot X8 cusub, octocopter qaabdhismeed cusub.
MIT waxay abuurtaa barnaamij si aad uqorshaysato diyaaraddaada aan duuliye lahayn
Baarayaasha ka socda MIT waxay soo saareen softiweer aad u fudud in la isticmaalo oo aad ku soo saari karto diyaarad kuu gaar ah.
Sky Guys waxay soo bandhigaan diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ah oo leh madaxbanaani ka weyn 24 saacadood
Sky Guys waa bilow Canadian ah oo hadda soo saaray DX-3, oo ah diyaarad aan duuliye laheyn oo duulimaad leh oo awood u leh in ay duusho in ka badan 24 saacadood.
DJI waxay ku dhawaaqeysaa horumarin lataaban karo SDK-ga
Intii lagu gudajiray shirkii ugu dambeeyay ee ay abaabushay DJI ee San Francisco, shirkadu waxay ku dhawaaqday abuuritaanka SDK cusub oo leh shaqooyin iyo awood dheeri ah.
DJI iyo EENA waxay saxiixeen heshiis lagu mideynayo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee drones-ka
DJI waxay hadda heshiis iskaashi la gaadhay EENA si loo horumariyo adeeg ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iska kaashan karaan dhammaan noocyada samatabbixinta.
DroneGun, waa suuq si loo soo rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno DroneGun, macno ahaan waa bazuka awood u leh inuu rido nooc kasta oo diyaarad ah oo ka shaqeynaya nooc kasta oo soo noqnoqod ah.
Novadrone Nomad, diyaarad cusub oo noocyo kala duwan leh ayaa suuqa ku dhacday
Novadrone ayaa hadda si rasmi ah u soo bandhigtay Nomad, oo ah diyaarad cusub oo noocyo kala duwan leh oo loogu talagalay qaybta xirfadleyda oo leh astaamo aad u xiiso badan.
HEMAV waxay ku guuleysatay 3 milyan oo euro wareegii ugu horreeyay ee maalgashi
HEMAV, oo ah shirkad Isbaanish ah oo ku takhasustay droneska, ayaa ku guuleysatay inay soo ururiso ugu yaraan seddex milyan oo euro wareegii koowaad ee maalgashiga.
Dhacdada 38 E384, diyaarad drones ah oo awood u leh inay daboosho illaa 800 hektar hal duulimaad
Dhacdada 384's E38 diyaarad aan duuliye wadin ah ayaa hadda heshay cusbooneysiin u oggolaaneysa inay khariiddo ka dhigto illaa 800 hektar hal duulimaad.
DJI AGRAS MG-1S, oo ah diyaarad Drone ah oo loogu talagalay inay qabato howlaha beeraha
DJI waxay shacabka u soo bandhigtay diyaaradeeda cusub ee loogu talagalay howlaha la xiriira beeraha, tusaale loogu magac daray DJI AGRAS MG-1S.
Tactical Robotics 'diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan' drone-taxis 'ayaa si guul leh ku fuliya tijaabooyinkoodii ugu horreeyay ee dhabta ah
Ka dib muddo dheer oo horumar iyo shaqo ah, ugu dambayntii shirkadda Tactical Robotics waxay ku guuleysatay inay si guul leh u tijaabiso taksiiradeeda aan duuliyaha lahayn ee tijaabooyinka berrinka.
AeroVironment Quantix, oo ah diyaarad iswada oo aad hubaal ka heli doontid
AeroVironment ayaa hadda ku dhawaaqday bilaabista suuqa ee Quantix, oo ah diyaarad iswada oo loo habeeyay inay ururiso xogta suuqa xirfadeed.
UNHCR waxay bilawday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u caawiso dadka soo barakacay iyo qaxootiga
UNHCR ayaa hada ku dhawaaqday in, si loo caawiyo dadka soo barakacay iyo qaxootiga ku sugan koonfurta Suudaan, ay bilaabi doonaan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones.
AgPixel iyo agX Platform waxay ku biirayaan xoog si ay u bixiyaan adeegyo ka wanaagsan xagga beeraha
AgPixel iyo agX Platform, waa laba shirkadood oo u heellan soo saarista iyo nashqadeynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaanno saxsanaanta beeraha.
AirSelfie, oo ah diyaarad Drone ah oo loogu talagalay in ay iska qaaddo sawirada
AirSelfie waa diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo le’eg cabbir ahaan taleefanka gacanta oo si gaar ah loogu talagalay in lagu sawiro sawirada.
Spain ayaa ugu dambeyn awoodi doonta inay martigeliso mid ka mid ah tijaabooyinka Drone Champions League
Marka la daabaco saldhigyada cusub ee Drone Champions League, waxay raadinayaan halka ay ka fulinayaan tijaabooyinka midna wuxuu ku dambeyn karaa Spain.
Disney waxay abuuri doontaa bandhigyo habeen iyadoo la adeegsanayo 300 oo drones ah oo tababar ah
Disney iyo Intel waxay ka wada shaqeeyeen sidii ay u abuuri lahaayeen bandhig habeenle ah oo ku saleysan drones isku-duuban oo iftiiminaya.
Kuwani waa dhammaan astaamaha ku jira DJI Phantom 4 Pro cusub
DJI Phantom 4 Pro waa moodelkii ugu dambeeyay ee ugu weynaa ee ay suuqyada ka bilawdo shirkadda Shiinaha, oo ah diyaarad aad u qaas ah oo aan duuliye lahayn kuna qalabaysan tiknoolajiyaddii ugu dambeysay.
Baro waxyaabaha cusub ee loo yaqaan 'DJI Inspire 2' si ka fiican sidii hore
DJI waxay bilaabeysaa war-saxaafadeed halkaas oo uu kaga hadlayo nooca cusub ee DJI Inspire 2, oo ah diyaarad xirfad sare leh oo duubista fiidiyoowga xirfadleyda ah.
Nin Mareykan ah ayaa ogaaday in xaaskiisa aysan daacad ka aheyn diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drone-ka
Mareykan, ka dib markuu bilaabay inuu ka shakiyo daacadnimada xaaskiisa sababo la xiriira isbeddelo gaar ah oo uu ku arkay ...
MMC F6 Plus, diyaarad awood u leh inay istaagto DJI Matrice 600
MMC F6 Plus waa diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn oo ay soo saartay shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee MicroMultiCopter Aero Technology oo awood u leh la tacaalidda awoodda weyn ee DJI Matrice 600.
Walkera AiBao, oo ah diyaarad Drone ah oo ku qalabaysan tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee dhabta ah ee la taaban karo
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno Walkera AiBao cusub, oo ah diyaarad Drone ah oo ku qalabaysan teknoolojiyad sida xaqiiqda dhabta ah iyo xaqiiqda la kordhiyay
Google ayaa hakisay mashruucii ay wadatay ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan Drone sababo la xiriira dhibaatooyin dhaqaale
Google ayaa si kumeel gaar ah u hakisay Mashruucii Wing sababo la xiriira dhibaatooyin dhaqaale oo qaarkood ay maanta haysato shirkadda.
GoPro wuxuu dib uxasuustaa Karma kadib markuu ogaadey arimaha korontada duulimaadka
GoPro ayaa goordhaw ku dhawaaqday go'aanka ay diyaaradda Karma Drone-keeda ah ay ugala soo baxeyso suuqa waqtigaan kadib markii ay ku ogaatay dhowr duulimaad dhexdiisa dhibaatooyin xaga korontada ah.
Madaarka Caalamiga ah ee Dubai wuxuu durbaba tijaabiyaa aaladaha ugu horreeya ee diyaaradaha wax basaasa
Kuwa masuulka ka ah Madaarka Caalamiga ah ee Dubai ayaa goordhaw shaaciyay in maanta taxane ah qalabka wax basaasa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu tijaabiyo xayndaabka
Tani waxay noqon kartaa saldhigyada gargaarka dhulka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida ay sheegeen koox ardayda UPV ah
Koox ka mid ah ardayda UPV ayaa na tusaya sida ay u ekaan karaan iyo xitaa hawlgalka aragtiyeed ee saldhigyada kaalmada dhulka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
UPM waxay abuureysaa softiweer si diyaarad kasta oo aan duuliyaha lahayn ay u ogaan karto dab
Koox horumariyeyaal ah oo ka socda UPM ayaa soo bandhigay barnaamij ay diyaarad kasta oo aan duuliye lahayn ay ku ogaan karto dab.
Egatel wuxuu soo bandhigayaa nidaamkeeda isgaarsiinta cusub ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Egatel, oo ah shirkad Isbaanish ah oo fadhigeedu yahay Galicia, ayaa hadda soo bandhigtay nidaam isgaarsiineed oo cusub oo looga hortagayo jabsiga gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
DCNS iyo Airbus waxay kawada shaqeyn doonaan sameynta nidaamka cusub ee UAV
Airbus ayaa hadda la shaqeysay shirkadda Faransiiska ee DCNS si ay uga wada shaqeeyaan naqshadeynta iyo soo saarista nooc cusub oo ah gaari madax-bannaan.
Jonathan Anderson wuxuu abuuraa nidaam awood u leh inuu jabsado signalka diyaarad kasta oo duulimaad ah inta uu duulayo
Jonathan Anderson, khabiirka amniga ee Trend Micro, wuxuu ku guuleystey inuu soo saaro nidaam awood u leh inuu jabsado astaamaha kontoroolka ee diyaarad kasta.
Tech Guaraní wuxuu soo saaraa diyaaraddii ugu horreysay ee aan duuliye lahayn ee Latin America
Tech Guaraní waa shirkaddii ugu horreysay dhammaan Ibero-America oo awood u leh inay soo saarto drones dalab iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada daabacaadda ee 3D.
Magaalada Avilés waxay u isticmaali doonaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u maareeyaan soo dejinta alaabada dekeddooda
Laga soo bilaabo dekedda Avilés waxaa hadda lagu dhawaaqay in wixii hadda ka dambeeya ay isticmaali doonaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u xakameeyaan dhammaan badeecadaha soo galaya.
Shirkadda Unión Fenosa ayaa durba dib u eegis ku samaysay in ka badan 1.300 oo kilomitir oo xarig koronto ah oo ay la socdaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Unión Fenosa wuxuu ku dhawaaqayaa inay durbaba dib u eegeen in kabadan 1.300 oo kilomitir oo xarig koronto ah oo ay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ka wadaan gobolka Galicia oo keliya.
Amazon waxay na tuseysaa naqshaddii ugu horreysay ee minidron ee awood u leh helitaanka carruurta
Amazon waxay muujineysaa sawirradii ugu horreeyay ee patent-keeda minidron oo ku qalabeysan Alexa oo awood u leh raadinta carruurta lumay jawi kasta.
DJI wuxuu soo bandhigayaa Zenmuse Z30, oo ah kamarad loogu talagalay diyaaraddaada leh 30x optical zoom
Laga soo bilaabo DJI waxaan ka helnay qoraal rasmi ah oo ku dhawaaqaya bilaabida Zenmuse Z30, kamarad cusub oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee leh 30x optical zoom.
Dooxada Estós, adhijirradu waxay xoolahooda kula socdaan drones
Dooxada Estós, oo ku taal Aragonese Pyrenees, waxaa laga wadaa mashruuc lagu diyaarinayo diyaarad cusub oo ah nooca aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drone-ka oo awood u leh la socodka xoolaha.
Sweden waxay mamnuucday duubista fiidiyowga si loogu isticmaalo shakhsi ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Maxkamada sare ee maamulka sweden ayaa hada soo saartay sharci mamnuucaya adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'drones' si duubista fiidiyowga loogu isticmaalo shaqsi ahaan.
Software-kan ayaa kuu ogolaanaya inaad duullimaadkaaga duullimaadyo saacado ah adigoon shidaal u baahnayn
ALOFT waa barnaamij cusub oo ay soo saartay shaybaarka cilmi baarista badda kaasoo ka dhigi kara diyaaraddaada duullimaadka ah saacado badan iyadoo aan lahayn awood batteri.
Atomiga Shaybaarka ayaa hal maalin ku bixin doona soo saarista gacmo gacmeed lacag la'aan ah
Atomic Lab ayaa hadda ku dhawaaqay in, maalin shaqo oo buuxda, ay u heellan yihiin sameynta gacmo gacmeed gebi ahaanba bilaash ah.
Ciidamada Cirka ee Mareykanka ayaa F-16-kiisii ​​hore u badalay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Mid ka mid ah ujeeddooyinka Ciidamada Cirka Mareykanka ee sanadaha soo socda waa macno ahaan in la casriyeeyo ...
Airblock, oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee ku habboon barashada barnaamijyada
Airblock waa abuurkii ugu dambeeyay ee laga sameeyay Makeblock, nooc ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'drone modular' oo si gaar ah loogu talagalay adeegsadaha inuu barto farsamooyinka barnaamijyada.
Guddiga Horumarinta Kongareeska wuxuu cadaadis saarayaa EASA si loo sameeyo qawaaniin loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Suuqa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee laga saadaaliyo Spain iyo ficil ahaan adduunka oo dhan ...
NVdrones iyo DroneDeploy ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi cusub
Waad ku mahadsantahay heshiiskan iskaashiga cusub, dadka isticmaala DroneDeploy waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan barnaamijka ay soo saartay NVdrones.
Valencia, oo ah hormuudka kormeerka meelaha miyiga ah ee leh diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Gobolka Valencia ayaa hada hawlgaliyay mashruuc cusub kaas oo ay ugu talagaleen inay kula socdaan meelaha miyiga ah iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones ayaa kusoo dhaca diyaaradaha dagaalka si ay u qiimeeyaan qatarta ka imaan karta
Boqortooyada Ingiriiska gudaheeda waxay bilaabeen inay qaadaan tijaabooyin taxane ah halkaasoo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay ku dhacaan diyaaradaha ganacsiga si loo qiimeeyo qatarta ka imaan karta.
Diyaarad aan duuliye laheyn oo iswada? Isku day Baasaboorka Hover Camera
Hover Camera Passport waa diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'drone' oo si gaar ah loogu talagalay si, si buuxda oo iskiis ah, ay awood ugu leedahay inay qaadato nooc kasta oo sawirro ah.
General Electric si ay u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay u ogaato gaaska ka daadanaaya
General Electric ayaa hadda ku dhawaaqay abuurista barnaamij cusub oo ay ku soo saari doonaan diyaarado gaar ah oo loogu talagalay howlaha ogaanshaha gaaska.
Tani waa waxa Falcon 8 + u eg, diyaaraddii ugu horreysay ee ganacsi ee aan duuliyaha lahayn oo ay abuurtay Intel
Gelitaanka meesha aan ku baran doonno Falcon 8 + wax yar oo ka wanaagsan, diyaaraddii ugu horreysay ee ganacsi ee aan duuliyaha lahayn ayaa naqshadeysay, soo saartay oo suuq gaysay Intel.
DJI waxay ku dhawaaqeysaa Iskaashi la leh Datumate si loo bixiyo nidaamyo kormeer xirfadeed
Qoraal rasmi ah oo ay soo saareen DJI iyo Datumate waxaa lagu wargeliyay in labada magacba ay si wada jir ah u wada shaqeyn doonaan si ay u bixiyaan nidaam ilaalin xirfadeed.
SenseFly eBee, oo ah diyaarad Drone ah oo ku takhasustay khariidaynta sawir qaadista
SenseFly ayaa hada ku dhawaaqday suuq geynta eBee cusub, oo ah diyaarad aan duuliye lahayn oo loogu talagalay khariidaynta sawir qaadista.
NOAA waxay macluumaad ka soo saari doontaa duufaanta iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
NOAA ayaa hadda ku dhawaaqday abuuritaanka barnaamij gaar ah oo loogu talagalay in looga shaqeeyo soo saarista macluumaadka duufaannada iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Samee oo ku diyaari diyaaraddaada drones-ka adiga oo adeegsanaya gogo 'LEGO mahadsanidiin Flybrix
Waad ku mahadsan tahay mashruuca cusub ee Flybrix, waxaad ku dhisi kartaa dhismooyinka LEGO waxaadna barnaamijka ku diyaarin kartaa koodhkooda isha inta jeer ee aad rabto.
Ardayga UCAM wuxuu u sameeyaa barnaamijkiisa sirdoon farsamo gacmeed drones
José Antonio Rubio López-Atalaya, oo ah arday dhigta jaamacadda UCAM, ayaa soo bandhigay barnaamij sir ah oo sirdoon macmal ah oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ah mashruuc shahaado ugu dambaysa ah.
Drones waxay muhiim u tahay rakibidda shabakadaha 5G ee Nokia
Nokia waxay ku dhawaaqeysaa in maanta ay durba dhex gashay howlgelinta shabakadaha 5G, howshaas oo ay ugu baahan doonto caawimaadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ah.
Kordhi madax-bannaanidaada diyaaraddaada iyada oo ay ugu wacan tahay baytariyadan hydrogen-ka ee kacaan-wadaagga ah
Koox injineero ah oo ka socda Jaamacadda Valladolid ayaa ku guulaystay inay soo saaraan baytariyada taxane ah oo haydarojiin ah oo awood u siin kara drones madax-bannaanidooda
Istaraatiijiyada Istiraatiijiyadeed waxay ku qiyaaseysaa in keenista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay kori doonto 248% sanadka 2016
Warbixinteedii ugu dambeysay, Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadda Dibadda, waxay saadaalisay in keenista badeecadaha iyo baakadaha drones-ka ay kori doonaan 248% sanadka 2016.
Nokia waxay bilaabaysaa tijaabinta nidaamkeeda maareynta taraafikada ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Nokia ayaa hadda ku dhawaaqday inay diyaar u yihiin inay tijaabiyaan nidaamkooda maareynta taraafikada ee duullimaadyada meelaha bannaan.
Xiaomi mar horeba waa shirkadda saddexaad ee qiimeynta adduunka ee soo saarayaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Ka dib hal sano oo hal-abuurnimo iyo guulo waaweyn, Xiaomi ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay inay kaalinta saddexaad ka gasho qiimeynta adduunka ee soo saarayaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Jaamacadda Valencia waxay abuurtaa diyaaradii ugu horeysay ee diyaaradeed ee Isbaanishka ah
Koox cilmi-baareyaal ah oo ka socda Jaamacadda Valencia ayaa ku guuleystay inay abuuraan diyaaraddii ugu horreysay ee 3D ah oo diyaarad aan duuliye lahayn oo lagu daabacay Spain.
UPS waxay bilaabaysaa inay fuliso tijaabooyinka ugu horeeya ee diyaaradaha qumaatiga u kaca
UPS iyo CyPhy Works waxay helayaan ogolaansho ay ku hormariyaan mashruucooda si ay u abuuraan drones gaar ah oo loogu talagalay gaarsiinta qashinka.
Baarayaasha ka socda Imperial College London waxay maareeyaan inay duullimaad diyaaradeed weligood wataan
Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Imperial College London ayaa ku guuleystey in ay duullimaad diyaaradeed weligood u baahdaan iyada oo aan loo baahnayn in ay baytariga qalabayso.
Prodrone PD6B-AW-ARM, oo ah diyaarad Drone ah oo leh ciddiyo awood u leh daabulida walxaha
Prodrone PD6B-AW-ARM waa magaca shirkadda Prodrone ay ku baabisay abuurkeedii ugu dambeeyay, diyaarad drones ah oo leh hub awood u leh inay qaado walxaha culus
DelfAcopter, oo ah diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'multi-rotor drone' oo ay soo saartay Jaamacadda Farsamada ee Delf
DelfAcopter waa dayax gacmeed diyaaradeed oo multi-rotor ah oo awood u leh inay ka duusho ugana soo degto si habsami leh oo ay soo saartay Jaamacadda Farsamada ee Delf
Ku helitaanka barashada Aerix VIDIUS waxyar oo fiican
Gelitaanka aan u hurayno inaan wax yar ka sii fiicnaano astaamaha oo dhan iyo waxa minidron sida Aerix VIDIUS ah ay soo bandhigi karto.
DJI Mavic Pro, baro cilmiga ugu dambeeya ee umadaha Shiinaha xoogaa ka fiican
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno waxa ku saabsan DJI Mavic Pro cusub, abuurkii ugu dambeeyay ee lagu gaaro suuqa DJI-da caalamiga ah ee Shiinaha.
ESPN iyo Sky Sports waxay ku dhawaaqayaan xiisaha baahinta tartamada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Shabakadaha telefishinka ee ESPN iyo Sky Sports ayaa dhawaan shaaciyey xiisaha sii kordhaya ee ay u qabaan tabinta tooska ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Cheerson CX10, oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'drone mini' oo leh kaamerad aad jeceshahay
Haddii aad raadineyso diyaarad aan qaali ahayn oo aad u yar, hubaal waad jeclaan doontaa waxa ay bixiso Cheerson CX10, moodel xitaa ku rakiban kamarad.
DARPA waxay ka shaqeyn doontaa shabakad awood u leh la socoshada dhaqdhaqaaqa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee magaalooyinka
DARPA ayaa hada ku dhawaaqday inay qorsheynayaan inay abuuraan nooc ka mid ah shabakadaha magaalada ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee awooda inay duubaan dhamaan howlaha ay qabtaan.
Shabakadaha 4G ayaa kordhin doona duulimaadyada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Waqtigan xaadirka ah mid ka mid ah meelaha daciifka ah ee adduunka diyaaradaha, marka lagu daro madax-bannaanideeda, waa taas ...
Diyaaradani waxay awood u leedahay inay ku duusho 241 kilomitir saacadiiba
Stratasys iyo Aurora Flight Sciences waxay ku biirayaan xoog si ay u abuuraan diyaarada aan maanta kuu soo bandhigo, moodal awood u leh inuu gaaro 241 km / h ee xawaaraha ugu badan.
Murcia ayaa isticmaali doonta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay ula socdaan biyaha markabka Mar Menor
Murcia ayaa hada ku dhawaaqday inay qalabayn doonaan kooxaha mas'uulka ka ah la socoshada dhacdooyinka suurtagalka ah ee Mar Menor diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.